Hadda waad ku raaxeysan kartaa Fortnite 90 Hz haddii aad leedahay Galaxy Tab S7 ama S7 + | Androidsis
Iyadoo aan loo eegin dagaalka ay Ciyaaraha Epic wajahayaan Apple badanaa, waa dagaal, sida uu yiri garsooraha kiiska gacanta ku haya, waxay dejin kartaa tusaale dhammaan barnaamijyada kale ee ka socda Sony, Microsoft iyo NintendoMarka lagu daro Google, filimka fiidiyowga ee fiidiyowga wuxuu sii wadaa inuu ka shaqeeyo hagaajinta waxqabadka cinwaankiisa ugu caansan: Fortnite.
Bartamihii Maajo, OnePlus wuxuu ku dhawaaqay iswaafajinta, markii hore si gaar ah, ee Fortnite oo leh shaashadeeda 90 Hz, qaarna bixiya animations jilicsan iyo bixinta jawaab celin muuqaal ah. Ilaa hadda, ma jiro casriga kale ee la jaanqaadi kara, xitaa Samsung S20, oo ah wax si gaar ah u muuqda.
Waxay umuuqataa in heshiiska ay gaareen Epic Games iyo OnePlus uu lahaa gaar ahaansho kumeelgaar ah oo aan wali dhameystirmin, gaar ahaaneed oo kuxirnaa taleefannada casriga ah. Haddii aan ka hadalno kiniiniyada, Samsung ayaa ku dhawaaqday taas kiniinka cusub ee Galaxy Tab S7 iyo S7 + horeyba wuxuu u taageeray shaashadda 90 Hz labada moodle.
Iibso Samsung Galaxy Tab S7
Labada Samsung Galaxy S20 iyo Galaxy Note 20 labaduba waxay bixiyaan shaashad dhan 120 Hz, inkasta oo hadda, haddii aad ka ciyaarto Fornite mobilkaaga, ma heli kartid sida ugu badan cinwaankan. In kasta oo Fortnite aysan ahayn sabab ku filan oo loo iibiyo taleefan casri ah, inaad si buuxda uga faa'iideysan karto faa'iidooyinka ay bixiso aaladda maamusha, haddana ma ahan inay ahaato wax heshiis u dhexeeya shirkadaha.
Iibso Samsung Galaxy S7 +
Batariga wuu dhib qabaa
Wax kasta oo ka sarreeya 60 Hz shaashadaha casriga ah, si dhab ah u saameeya isticmaalka batteriga, waa dhibaato ay tahay inaan ka feejignaano markaan dooneyno inaan isticmaalno sicir-celin sare. Markaa haddaad aragto in batteriga aaladdaadu si weyn loo dhimay, dhib kuma aha kiniinka, laakiin waa dhibaato la xiriirta kiniinka, laakiin waa mushkilad u gaar ah tiknoolajiyadda maanta.
Wadada buuxda ee maqaalka: Androidsis » Aaladaha Android » Mobiles » Samsung » Hadda waad ku raaxeysan kartaa Fortnite 90 Hz haddii aad leedahay Galaxy Tab S7 ama S7 +
U ogolow naftaada inay sakhraansan tahay nabadda ay Qaaliga My Bisadu abuurto iyo adduunkeeda sixirka ah ee bisadaha
Tani waa gudaha gudaha OnePlus 8T: sheygiisa batteriga unugga dhalaalaya